BAREFOOT...!!!: यस् कारण बन्द हुनसक्छ साझाबस
यस् कारण बन्द हुनसक्छ साझाबस
गएको महिना सार्वजनिक यातायात पीडितहरुकालागि एउटा सुखद समाचार लिएर आयो, त्यो थियो सहकारीमा परिणत साझा यातायातद्वारा पुन: सार्वजनिक यातातायात सन्चालन । सधैं माइक्रो नामको जिनिसमा उंधोमुन्टो लाएर कोच्चिनेहरुले दुइवटा रुटमा भएपनि राहतको सास फेर्न पाए र रहर या फेशनको लागि पनि मैले साझा बस चढेको छु भन्ने पनि लहरै चल्यो । हिजो समाचार पनि आयो गएको महिनामा साझाबसले साँढे छ लाख नाफा गर्‍यो खर्च कटाएर भन्ने । १६ वटा ५५ सिटका बस एक महिना चलाउँदा साँढे छ लाख नाफा हुनु ठीक हो होइन त्यस्का आफ्नै बिश्लेषण होलान्, तर यो अबधीमा आधा घण्टा ४५ मिनेट पर्खेरै भएपनि साझा नै चढ्ने जिद्दी गर्ने मजस्ता यात्रु धेरै भेटेको छु मैले ।
Sajha Bus Opening : image source myrepublica.com
सकारात्मक कुरा धेरै छन्, बोलिवचन सहनु नपर्ने, उभिंदा पनि ढाड कुप्र्याउनु नपर्ने, भाडाको लागि किचकिच नगर्ने, रोकेर नबस्ने, नियमपुर्बक ओर्लिने उक्लिने इत्यादि । यस् अवधिमा संयोगले अनुकुल रूट परेकाले होला, धेरैजसो साझा बस् नै चढियो । आजकाल माइक्रो चढ्न पर्दा अप्ठेरो लाग्ने भएको छ । तर हिजो भर्खर आएको समाचारमा "रात्री सेवा बन्द हुने" भनेझैं कता कता "साझा बस पनि बन्द हुने त होइन ?" भन्ने मनमा लाग्न थालेको छ । मेरो कामना छ, म गलत होउं, साझा यातायातले प्रगति गर्दै जाओस्, तर साझाबसको शुरुको उत्साह रात्रीबस वाला बेलाको भन्दा फरक देखिन्न । आफुलाई लागेको एकदुइ कुराहरु लेखेको छु, मलाई आफु गलत साबित हुनै मन छ, रात्रीबस जस्तो बिजोक नहोस् साझाको भन्ने कामना पनि :
१) अब्यबस्था : साझा यातायातमा एकजना मात्र कन्डक्टर या परिचारक हुन्छन्, ढोका दुईवटा । नेपालीहरु स्वभाबैले हडबडे हुन्छन्, चढ्न ओर्लिन सबैथोकमा । अलिक पिक आवरमा चल्ने साझाहरुमा ती परिचारकले पैसा उठाउन भ्याएको देखिन्न । नेपाली न परे न नचढ् भन्दा टेर्छन्, न अगाडिको ढोकाबाट ओर्ली भन्दा टेर्छन् । बेस्सरी कोचिएका बेला कतिको भाडा लिन छुट्छ ती बिचराहरुलाई पत्तै हुन्न । त्यसमाथि बेस्सरी प्याक भएका बेला अगाडिबाट पछाडि आउननै महाभारत हुन्छ ।
२) ब्यबसायिकताको अभाब : सिधै भन्दा साझायातायात चलाउनेहरु "मेरो होइन" भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् । उदाहरणका लागि ९-१० को बीचमा सामाखुशी, बसुन्धारा, महाराजगन्जबाट टन्न यात्रुहरु कार्यलय आउन गाडी पर्खिरहेका बेला ४-५ वटासम्म साझाबस लाइन लगाएर रित्तै बसपार्कतिर गैराखेका हुन्छन् । पिकआवरमा कता कसरी आउने भन्ने त साझाबसमा छलफल नै हुन्न जस्तो लाग्छ । चाहिएको बेला साझा नआएसी मान्छेले दुई चार दिन कुर्लान् त्यस्पछी कस्ले कुर्छ ? मैले शुरुका दिनमा साझाबस चढ्दा नियमित चढ्नेहरु आजकाल देखिन्नन्, कारण उही, कुर्दा कुर्दा हत्तु भईन्छ । आधा भाडामा यात्रुलाई गाडी चढाएर पनि पिकआवरमा पुगिएन भने रित्तै कुदेर त रमिता मात्रै हुन्छ ।
३) नियम मिच्न शुरु : साझाबसको शुरुका दिनको आकर्षण नियमहरु थिए, पछाडीको ढोकाबाट मात्र चढ्ने, अगाडिको ढोकाबाट ओर्लिने, स्टपमा मात्र रोक्ने आदी । अहिले बिस्तारै साझाका ड्राइभरहरु नियम मिच्न थालेका छन्, अगाडि पछाडी दुबै ढोकाबाट चढाएर झर्नै नसकिने बनाइदिने, जाममा ढोका खोल्दिने, स्टप नभएका ठाउँमा पनि रोक्दिने, लेन मिचेर हिंड्दिने आदि । बिस्तारै मान्छेहरुलाई नियम सिकाउनु पर्नेमा आँफै त्यसो गर्न थालेसी साझा बसहरु माइक्रो बन्न बेर लाग्दैन ।
Sajha Bus images : by rdulal.blogspot.com
४) कर्मचारीहरुको असन्तुष्टी : साझा यातायात व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुको शिफ्ट लगायतका कुरा व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ । एकदिन साँझ पानी परीरहेको बेला साझाले सुन्धारा ल्गेर छोड्दियो हामीलाई, मेरो शिफ्ट सकियो अर्को आउछ भनेर । पानी परेकोबेला साझा चढ्न कुद्नेहरुको बिचल्ली पारेर । किन यस्तो गरेको भन्दा म त जागिर छोड्ने हो के मतलब भन्दै त्यसो गर्नेहरुले साझालाई डुबाउने पक्का छ । एउटै ब्यक्तीले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न सक्दैन । यसरी सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टी पोख्नेगरी कर्मचारीहरु निराश हुनु भनेको व्यवस्थापकिय कमजोरीभन्दा बाहेक केही होइन ।
५) ठगी : एकजना कन्डक्टर छन्, ती यति बाठा छन् कि तिन्ले यात्रुहरुले फालेको टिकेटका टुक्रा टिप्दै प्याडको बीचमा राखेर दिन्छन् । कसरी थाहा भयो भन्दा एकदिन मेरो साथी र म चढेर दुइवटा टिकेट लिंदा एउटा ८० हजारवाला थियो अर्को नब्बे । साझाले आफ्ना कर्मचारिलाई पर्याप्त सुबिधा र आफ्नोपन देओस्, र यस्तो काम गर्दै हिंड्नेलाई कार्वाही पनि गरोस् । कुनैबेला टिकेट सकियो भन्दै भएजती सबैलाई विद्यार्थी छुटको १० रुपैयाँवाला टिकेट दिंदै हिंडेको पनि देखिन्छ । स्मरण रहोस्, पहिलेको साझा पनि यस्तै बाङ्गाटिङ्गा कर्मचारीले डुबाएका हुन्, मान्छे चढ्न छोडेर होइन ।
अन्त्यमा साझा यातायात व्यवस्थापनले गएको एक महिनाको आत्ममुल्यांकन गर्न जरुरी छ । जुन हिसाबले कर्मचारी निराश बन्दै गएका छन्, राम्रो संकेत होइन । शिफ्टअनुसार काम लगाउने, बढी काम लगाउन परे ओभरटाइमको पैसा दिने, पिकआवरमा अलिक मिलाउने गरी प्रोफेसनल हुने, नियममा चल्न यात्रुहरुलाई बानी पार्ने लगायतका काम नगर्ने हो भने साझा बस फेरी बन्द हुन बेर छैन । किनकी अहिले नयाँ हुन्जेल चढ्न मान्छेहरु जती एक्साइटेड छन्, त्यती भोली हुन्नन् यस्तै ढिलासुस्ती र अब्यबस्था चलिरहने हो भने ।
साझाबसका टाउकेहरुले सोचुन्, पुनर्जन्म दिएर मात्र कर्तब्य पुरा भएको छैन । असली परिक्षा अब शुरु भो ।
Labels: Issues, sajhabus, society
Rose Lama May 17, 2013 at 10:35 PM
real estate in nepal May 31, 2013 at 1:27 PM
yasto pani huna sakchha